P&O Cruises Australia waxay ku dheeraatay joogitaanka Sydney iyo Brisbane
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » saaciday inay » P&O Cruises Australia waxay ku dheeraatay joogitaanka Sydney iyo Brisbane
Wararka Australia • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • saaciday inay • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Wararka Raaxada • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka
Dawladuhu waxay si cad u caddeeyeen in marinnada tallaalka ay fure u yihiin soo afjaridda qufulka, xannibaadaha xadka iyo, ugu dambayn, dib-u-furidda Australia. Iyo qayb ka mid ah ku soo noqoshada bulshada caadiga ah ayaa hubineysa in in ka badan hal milyan oo Australiyaan ah oo doorta fasaxa dalxiiska sannad walba ay fursad u helaan inay sidaas sameeyaan mar kale.
Hakinta ikhtiyaariga ah ayaa lagu dabaqi doonaa safarrada la qorsheeyey inay ka baxaan Brisbane iyo Sydney.
P&O Cruises Australia waxay kaloo xaqiijisay inay baajineyso xilligeedii xagaaga ee Melbourne, oo aan hadda suurtogal ahayn in la bixiyo.
P&O Cruises waxay sugaysaa maalinta ay ku soo dhaweyn karto martiddeeda doonyaha ku soo noqoshada.
P&O Cruises Australia waxay maanta kordhisay hakinta hawlgallada maraakiibta ka baxaysa Sydney iyo Brisbane bil kale ilaa badhtamaha Janaayo sannadka soo socda si ay martida u siiso kalsooni weyn oo ku aaddan qorshaynta ciidahooda Kirismaska ​​iyo Sannadka Cusub sababta oo ah hubin la’aanta soo noqoshada socdaalka.
Hakinta ikhtiyaariga ah ayaa lagu dabaqi doonaa safarrada loo qorsheeyay inay ka baxaan 18ka Diseembar, 2021 illaa 14ka Janaayo, 2022 (Brisbane) iyo 18 Janaayo, 2022 ( Sydney).
Maraakiibta P&O Cruises Australia waxay kaloo xaqiijisay inay baajineyso xilligeedii xagaaga ee Melbourne, oo aan hadda suurtogal ahayn in la bixiyo sababtoo ah kordhintii ugu dambeysay.
"Waxaan garawsannahay in tani ay niyad jab ku tahay martidayada oo sugaysay inay la safraan asxaabta iyo qoyska intii lagu jiray Ciidda Masiixiga iyo Sannadka Cusub, hase yeeshee, waxaan doonaynay inaan ku dhawaaqno sida ugu dhaqsaha badan si aan u hubinno inay si hubaal ah u qorsheyn karaan xilliga fasaxa," Maraakiibta P&O Cruises Madaxweynaha Australia Sture Myrmell ayaa yidhi.
“Waxaan jeclaan lahaa inaan mar kale uga mahadceliyo martidayada daacadnimada iyo taageerada. Waxaan sugeynaa maalinta aan ku soo dhaweyn karno martida dusha sare si aan ugu dabaaldegno dhacdooyinkan gaarka ah ee kalandarka fasaxa. ”
Maraakiibta P&O Cruises Australia ayaa dhowaan ku dhawaaqday inay damacsan tahay inay dib u bilawdo howlihii gudaha iyada oo la raacayo safarro loogu talagalay martida iyo shaqaalaha si buuxda loo tallaalay.
“Dawladuhu waxay si cad u caddeeyeen in marinnada tallaalka ay fure u yihiin soo afjaridda qufulka, xannibaadaha xadka iyo, ugu dambayn, dib-u-furidda Australia. Iyo qayb ka mid ah ku soo noqoshada bulshada caadiga ah ayaa hubineysa in in ka badan hal milyan oo Australiyaan ah oo doorta fasaxa dalxiiska sannad walba ay fursad u helaan inay mar kale sidaas sameeyaan, ”ayuu yiri Mr Myrmell.
"Nasiib darrose, wali ma caddayn shuruudaha laga rabo dowladaha iyo mas'uuliyiinta caafimaadka dadweynaha si loogu soo laabto marxalad dib-u-socod ah oo gudaha ah laakiin waxaan ku rajo weynahay in wada-hadalladaani ay isu soo ururin doonaan hadda waxaa jira dardar dhab ah oo ku aaddan dib-u-furitaanka bulshada."
Martida boosaskooda la saameeyay waxaa lagu wargelin doonaa hakinta iyo xulashooyinka la heli karo si toos ah ama wakiilkooda safarka ee la magacaabay.